Trinité : Toherin’ireo mponina ny fitrandrahana an’ilay toerana ao amin’ny sahandriaka sisa tsy voakitika ao amin’ny faritra · Global Voices teny Malagasy
Taratasy iray milaza antsipirihany amin'ireo tomponandraikitra ny fanoherana ilay tetikasa
Nandika (fr) i Amélie
Voadika ny 22 Jona 2021 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, українська, English
Simeon Nakhid, flloha lefitry ny kaomitin'ny asa Acono Village Dynamic (AVDAC) sy Kelvin Nakhid, filoha lefitry ny kaomitin'ny asa ao amin'ny lemak'i Maracas, mijery ny fiantraikan'ilay fitrandrahana amin'ny manodidina ny lemak'i Maracas. Sary an'i Zico Cozier, fampiasàna nahazoana alàlana taminy.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra].
Ity lahatsoratra nosoratan'i Giselle Permell ity dia navoaka voalohany tao amin'ny tranonkalan'ny tambajotra Cari-Bois News. Dika nokiraina no averina avoaka etoana, ao anatin'ny fifaharahana iray hifampizara votoaty.
Tonga amin'ny haavo tsy mbola nisy hatrizay ny fimenomenonana ao amin'ny vohitr'i Acono rehefa lany haika nitady izay fomba rehetra azony natao ny mponina mba hanandramany hanakana ny fahatongavan'ny mpitrandraka iray vaovao ao amin'ny lemak'i Maracas. Any avaratry ny nosy, amin'ilay lalantsara avy any atsinanana miankandrefana no misy io toerana io.
Nandritra ny 70 taona, noho ny fisian'ny toeram-pitrandrahana iray ao dia niara-niaina tamin'ny fanelingelenana ara-tontolo iainana ny mponina tao an-toerana. Fanintelony izao ny mponina no tsy maintsy nanohitra ireo tsindry ataon'ny Blue Diamond Quarries. Katsahan'io orinasa io ny hitrandraka ny vatosokay manga ao amin'ilay lemaka izay hany riandrano sisa tsy voakitika ao aminy.
Simeon Nakhid, filoha lefitry ny kaomitin'ny hetsika Acono Village Dynamic, nanamafy tamin'ny Cari-Bois News fa tsy hilefitra ireo mponina ao an-toerana mandra-pialan'ilay tetikasa :
The bottom line is, we don’t want any new quarry in the Maracas Valley.
Ny teboka farany dia, tsy mila toeram-pitrandrahana vaovao ao amin'ny Lemaka Maracas izahay.
Hazavain'i Simeon Nakhid fa efa miatrika tsy fahampiana rano sahady ireo mponina. Atahoran-dry zareo araka izany ny ho fiharatsian'ny olana entin'ny fanokafana toeram-pitrandrahana iray vaovao..
Amin'izao fotoana izao ny Blue Diamond Quarries (BDQL) dia mampanao fanadihadiana momba ny fiantraika ara-tontolo iainana. Miaraka amina antontan-taratasy, antenainy ny hahazo ireo fanomezandalàna omen'ny Antokon-draharaha mpitantana ny tontolo iainana (EMA), izay tsy maintsy ilainy hahafahana mitrandraka ilay riandrano ao La Caurita any amin'ny lemak'i Maracas.
Misy fampitambaovao iray nalefan'ilay orinasa taminay nilazany fa « tiany ny hampivoatra ilay faritra » izay manana tahirin-karena mahavelom-bolo ho an'ny fampiroboroboana ara-toekarena » :
Being in a global pandemic and with many countries pursuing opportunities for its citizens and economy, this is a direct local and foreign investment for both country and community.
One of the goals of BDQL is to be certified in LEED, ISO 9001, ISO 45001 and ISO 14001 in order to maintain global standards and to ensure all concerns of stakeholders are met. We intend to work alongside the community to develop the area and to ensure they benefit from this undertaking. We will create jobs for members of the community and upkeep the area as we operate.
Miatrika valanaretina iraisana izao tontolo izao, marobe ireo firenena mikaroka làlam-barotra ho an'ny vahoakany sy ny toekareny. Fampiasambola mivantana eo an-toerana ataon'ny vahiny no resaka eto, na ho an'ny firenena, na ho an'ny vondrompiarahamonina.
Iray amin'ireo tanjon'ny BDQL ny hahazoana ny sertifikà LEED, ISO 9001, ISO 45001 sy ISO 14001 mba hifanaraka amin'ireo fenitra iraisampirenena sy hiantohana ny fandraisana ho anaty kajikajy ny ahiahin'ireo rehetra mpiara-miombona antoka. Tianay ny hiaraka hiasa amin'ireo mponina ao mba hampivoatra ilay faritra ary fanirianay ny hiantoka hoe hisitraka izay tombontsoa azo avy amin'io asa io ry zareo. Hamorona asa ao anatin'ilay vondrompiarahamonina izahay ary hikarakara ilay toerana mandritra ny fotoana itrandrahanay azy.
Miasa any amina toeram-pitrandrahana iray hafa any an-tampon'io tendrombohitra io ihany ny vondron'orinasa Coosal, saingy any amin'ny ilany kisilasila iray hafa. Ho an'i Simeon Nakhid, ny zavatra niainana tamin'io toeram-pitrandrahana voalohany io no manosika ny vahoaka ao an-toerana hanohitra ny fametrahana ilay faharoa ao amin'ny lemaka.
I’ve seen how the natural environment in Acono has changed over the years because of quarrying and the community has had enough.
Nandritra ny taona maro nifandimby, hitako ny fiovàn'ny tontolo iainana voajanahary tao Acono nateraky ny fametrahana io toeram-pitrandrahana io. Leo ny mponina ao an-toerana.
Nantsoina ny kabinetra Kairi Consultants mba hampiditra an-tsehatra ireo mponina ao an-toerana ho ao anatin'ilay tetikasa. Io fakankevitra io dia tafiditra indrindra ao anatin'ireo zavatra nangatahan'ny EIA. Araka izany, ny 19 Desambra dia nisy ny fihaonana nokarakaraina tao anaty fitoeran-tsompitra iray. Niray feo daholo ireo olona nanatrika fa « manohitra ilay toeram-pitrandrahana vaovao » :
Na teo aza io ala sakana io, nanambara ny orinasa BDQL fa naharay « fanontaniana sy fijoroana vavolombelona mahasoa avy amin'ireo mponina manohana ilay tetikasa amin'ny ankapobeny ».
Rehefa nifandray tamin'izy ireny izahay, marobe no nanipika ny endrika “mahonena” misy ilay renirano ao Acono. Izany indrindra no nambaran'i Julie Reyes De Matas izay efa mitsahatra misotro ronono ankehitriny. Somary mihataka kokoa amin'izany ny fanehoankevitry ny mponina sasany, isan'izany i Ray Francis, “analyste système”:
On one hand, you need the quarry stone for buildings and construction, but then you have a community that feels you don’t care about them 'cause you won’t try to fix up the place after you get what you want.
Etsy ankilany, mila vato avy ao amin'ilay toeram-pitrandrahana ianareo ho an'ny asa sy hanorenanareo tranobe. Saingy, etsy andaniny, heverin'ireo mponina ao an-toerana fa tsy miraharaha azy ianareo ary tsy hamerina amin'ny laoniny ilay toerana rehefa azonareo izay ilainareo ao.
Ny 14 Janoary 2020, nisy taratasy nalefan'ny AVDAC Acono Village Dynamic ho an'ny EMA. Hazavainy ao ny antony manosika ny vahoaka ao an-toerana hanohitra ilay tetikasam-pitrandrahana. Marihany fa :
The Acono River, the main drainage for the watershed that Coosal’s quarry occupies, is destroyed—muddy, dry and lifeless. It is so unfit for human use that it was diverted away from WASA’s [the Water and Sewerage Authority] intake.
Simba ny renirano Acono. Izy no tena ivarinan'ny rano avy amin'ny toeram-pitrandrahan'ny orinasa Coosal. Feno fotaka io lakandrano io, maina ary nanjavona ny fiainana anaty rano tao. Tena maloto tsy azon'ny olombelona sotroina ka dia navily làlana tsy hifangaro amin'ny fisintonana rano izay noforonin'ny Foibempitantanana ny rano sy fanarian-drano maloto.
Simeon Nakhid mandinika ny fotaka ao amin'ny renirano Acono. Sary an'i Zico Cozier, fampiasàna nahazoana alàlana taminy.
Ilay taratasy dia mampahatsiahy ihany koa fa amin'izao fotoana izao dia ny renirano Caurita sisa no hany loharano manome rano azo antoka ho an'ireo mponina. Rano avy amin'ny rano mikoriana avy ao La Caurita, toerana irian'ny orinasa Blue Diamond Quarries hanaovana fanitarana ny asany.
Amina toerana tena be lalankely fanaovana dia an-tongotra mankany amin'ireo Petroglyphes de Caurita no hametrahana ilay tetikasa. Io dia toerana misy ireo zavakanto an-davabato resahana be indrindra ao Trinité. Voafaritry ny National Trust ao Trinité-sy-Tobago ho tena manandanja ara-panahy ho an'ireo vahoaka vazimba teratany sy amerindiàna ao amin'ilay nosy izy io. Omen'ny vondrompiarahamonin'ireo vazimba teratany ao Santa Rosa dikany manokana ara-panahy rahateo ilay toerana sy ny manodidina azy.
Mbola loharanon'ahiahy hafa ihany koa ny famotehana ireo tetezana ao an-toerana sy ny làlana fankanesana any satria tsy mahazaka vesatra be ireny fotodrafitrasa ireny. Sady koa, ireo rano mitsororika dia vao mainka hanaratsy ny efa fahavoazan'ilay renirano sy, fanampin'izany, hampitombo ny mety hisian'ny tondradrano hampikorontana ny fiainan'ny mponina ao an-toerana ary ny fitoniany. Farany, marobe ireo olona miaina eny amoron'ny arabe ary tsy zakan'ny trano fonenan-dry zareo ny fiantraikan'ny hovitry ateraky ny fipoahana mafy eo akaiky eo.
Nampiakatra ny feony ihany koa ny kaomitin'ny asa ao amin'ny lemaka Maracas (MVAC) manohitra ilay tetikasa. Nandefa antso izy nitakiana ny fanesorana azy io ary miaraka miasa ihany koa amin'ireo vondrona hafa ao anatin'ny vondrompiarahamonina.
Tamin'ny 2016, efa notoherin'ireo fikambanana roa, ADVAC et MVAC, sahady ny Blue Diamond Quarries rehefa nikasa ny hipetraka tao amin'ilay lemaka. Milaza ho sahiran-tsaina izao i Simeon Nakhid fa hoe na dia miaraka aza ny AVDAC sy ny MVAC, mety tsy ho ampy ny herin'izy ireo ho entina manakana ilay tetikasam-pitrandrahana. Tsy heveriny mihitsy ny mety hisian'ny marimaritra iraisana ary, araka ny heviny, tsy misy azon'ireo mponina atao afa-tsy ny manao hetsika mafimafy kokoa, toy ny fibahanana ny fidirana mankao, ohatra.
Na izany aza dia amin'ny fotoana farany vao mety ampiasaina ity vahaolana ity. Dinihan-dry zareo amin'izao fotoana izao izay rehetra tonga eo anatrehany ka mety ho azo atao. Lazain'ny taratasy nalefa ho an'ny EMA ny fisian'ny fepotoana 15 taona hahafahana manohitra ilay tetikasa. Antsoina ireo rehetra mpisehatra mba hiverina handalina ireo olana efa miantraika sahady amin'ny vondrompiarahamonina ary mifamatotra amin'ny fitrandrahana ilay toerana.
Instead of facilitating any new attempts to exploit the valley, we urge the EMA and all other stakeholders to focus on improving and rehabilitating the environment […] through the restoration of the water courses available to us by damming the Concorde River upstream of Coosal’s and making it available to the Acono Water Works; by mandating ecologically appropriate rehabilitation of quarry lands to increase the resilience of the watershed; and by listening to the community when we say NO.
Tsy tokony hanao izay hanamora ny fisian'ireo tetikasa vaovao ao amin'ilay lemaka, fa takianay an-kitsirano amin'ny EMA sy ireo rehetra mpisehatra ao ny hifantohany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fanatsaràna ny kalitaon'ny tontolo iainana. Tsy maintsy mandalo amin'ny famerenana amin'ny laoniny an'ireo riandranonay izany. Ilaina ny manakana ny renirano Concorde avy any ambonin'ilay toerana fitrandrahan'ny orinasa Coosal. Ireny rano ireny araka izany dia mety hamatsiana ny rafitra fitsinjaràna rano Acono Water Works. Tsy maintsy idirana ihany koa ny famerenana amin'ny laoniny ireo tany notrandrahana ary amin'ny fanajàna ireo fotokevitra ara-tontolo iainana, mba hanatsaràna ny faharetan'ilay riandrano. Tokony henoina ihany koa ny mponina ao an-toerana rehefa mba miteny hoe “tsia”.
Misy nalefa ho an'i Franklin Khan, minisitry ny angovo sy ny indostria, ho an'i Rohan Sinanan, minisitry ny asa sy ny fitaterana, ary ho an'i Esmond Forde, solombavambahoakan'ny tanànan'i Tunapuna ny dika avy amin'ilay taratasy. Nandefasana ihany koa ny Foibem-pitondrana mitantana ny rano sy ny fanarian-drano maloto, ary hatramin'ny kabinetra fakànkevitra Kairi Consultants izay namaly toy izao manaraka izao:
We are conducting a neutral study. So we get information from the community as well as government agencies on the issue and we use that information to make our assessment.
Fitsirihana tsy miankina no ataonay. Araka izany dia manangona izahay torohay, na eny anivon'ny vahoaka izany, na eny anivon'ireo sampandraharaham-panjakàna. Avy eo ireny singa ireny dia ampiasainay hanaovana fanombànana.
Marihan'ny orinasa BDQL fa hatreto izy dia « mbola eo ampanaovana fotsiny ny fandinihana ireo fiantraika ara-tontolo iainana izy takiana mba hahazoana ny fanomezandàlana avy amin'ny EMA » :
This will then feed into how we set up operations in a conscious manner while
accounting for the needs of the communities. Lessons have been learnt from past operations and the concerns of the community are being addressed in our plans. These plans are dynamic and are being guided by the social and environmental assessments.
Izany no ho fototra iaingàna hametrahana ny asanay amin'ny fomba voahevitra tsara sy amin'ny fandraisana anaty kajikajy ny filàn'ny mponina ao an-toerana. Ny zavatra mampiasa loha azy ireo sy ireo lesona notsoahana avy amin'izay zavatra niainana efa nolalovana teo aloha no manosika ny tetikasanay izay mivoatra sy voafaritr'ireo fandalinana ara-piarahamonina sy ara-tontolo iainana.
Eo am-piandrasana, mitafy faharetana ireo vahoaka ao an-toerana mba hahafantarana raha toa ny feony ka tena nohenoina tokoa, ary raha toa izay nampiasa loha azy ireo ka tena hojerena marina.